Kedu ihe mkpọchi igwe kwụ otu ebe kachasị ike? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Mkpọchi igwe kwụ otu ebe - ngwọta ga-ekwe omume
Mkpọchi igwe kwụ otu ebe - ngwọta ga-ekwe omume
Kedu ihe mkpọchi igwe kwụ otu ebe kachasị ike?
IheMkpọchi Igwe Mgbaaka
Ebe obibi New York Fahgettaboudit:IkeUMkpọchi.
Abus Granit X-Plus 54 Obere: Ike na Ìhè.
Kryptonite New York Standard: Ike ma Nnukwu.
OnGuard Brute Mini: Onye siri ike ma dị ọnụ ala.
Onye na-echebe Pragmasis:IkeAnyịnya ChainMkpọchi.
Kryptonite New York Noose:IkeObere ChainMkpọchi.
(Drill hums) (hama) (nwoke na-eti mkpu) - Nabata azụ na Ihe dị n'ime, Abụ m Lincoln na nke a bụ Dan na taa nke a bụ igwe eletrik igwe ọhụụ m nwetara maka ekeresimesi - Ọ bụ igwe kwụ otu ebe mara mma. Udo na nchekwa bụ ihe onye ọ bụla na-eche banyere ya. SimpliSafe na-akwado edemede a, ọrụ nchekwa ụlọ maka ụlọ gị.
Anyị ga-ekwu maka nke a ruo na ngwụcha nke edemede ahụ, yabụ nọrọ na-ege ntị. Anyị chọrọ ka nchekwa dị ka o kwere mee ma kpuchido igwe kwụ otu ebe a, ya mere, agara m Amazon wee zụta mkpọchi igwe elekere ise ma ọ bụ anọ kachasị sie ike ị nwere ike ịzụta na Amazon - nke ahụ dịka ụdọ aka - ọ dị ka ndị buru ibu Eke aka maka igwe kwụ otu ebe gị. Kedu otu siri ike mkpọchi igwe kwụ otu ebe a? Ka anyị hụ nke kacha sie ike Lincoln kwesịrị iji igwe kwụ otu ebe mgbe ọ na-aga ụlọ akwụkwọ.
Nke a bụ mkpọchi Lincoln nke ọ na-eji nwa oge. Ka anyi nwalee ya na umu ihe ndia. Ka anyị lee ma ndị a ga-ebipụ, ọ dị mma na enwere m ya, yabụ m na pịkọta ya ọnụ. (lukewarm) - Nke ahụ dị mfe nghọta - Ọ dị mfe nke na Lincoln nwere ike ime ya na akwara nwa ya. (ochi) - Ọ dị nfe - nke a bụ ụdị mkpọchi igwe kwụ otu ebe ị zụtara eriri dị n'ime.
Gaba! Gaba, i nwetara ya! Mana ọ fọrọ nke nta ka ọ nweta ya, ọ fọrọ nke nta - (mkpu) - emere m ya! - managed jisiri! Ọ dị mfe na ọbụlagodi klas nke asatọ na klaasị nke atọ, ya bụ, nwata nwanyị nwere ụta JoJo Siwa na ntutu ya, enwere ike ịkpụji ọkara. Yabụ jụọ nhọrọ ndụ gị n'ezie ma ọ bụrụ na nke a bụ mkpọchi igwe kwụ otu ebe ị họrọ iji maka ụmụaka gị n'ụgba igwe gị dị oke ọnụ ma ọ bụ ọbụna igwe kwụ otu ebe na-adịghị ọnụ mgbe ị zigara ha ụlọ akwụkwọ. London, ekele maka mọzụlụ. - Odi mma, ije oma. - Ehee
Mkpọchi nọmba onye na-agbaji. Kedụ banyere mkpọchi kacha sie ike n'ụwa? A na-ejikwa mkpọchi igwe kwụ otu ebe maka ọgba tum tum. Echem ma anyi g’eme ya meghe ya. - Ọ mara ezigbo mma.
Anyị kwenyere na clipper na sledgehammer ga-arụ ọrụ na mkpọchi a) belata ihe, kpochapụ igwe kwụ otu ebe ma pụọ. Ya mere, bụ a n'akuku grinder aga bee site na nke a crazy, siri ike na-achọ Master mkpọchi Ihọd? (egwu obi ụtọ) Mba! - Eweghị ogologo oge ahụ. - you gụrụ? - Um, ọ dị ka - nkeji? 30 sekọnd? - Sekọnd 20 - Ọ na - ada ụda - Ọ na - ewute igwe kwụ n’ịgba m - igwe kwụ otu ebe gị na - adị mma. - Ọ fọrọ nke nta ka nke ahụ dị ka anyị na-eme a isiokwu nke tibanye n'ime igwe kwụ otu ebe, nke ahụ abụghị nzube anyị.
Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị - gịnị ka ọ bụ? Mkpọchi igwe kwụ otu ebe. - N'ime mkpọchi igwe kwụ otu ebe nke ị hụrụ ugbu a, nke a bụ nke kachasị ọnụ, $ 135.- Nke ahụ? - Eeh.
Ọ bụ titanium --- Karịa olu ahụ? - Karịa nnukwu ihe olu ahụ kryptonite, ee - Ọ bụghịdị nke ahụ dị arọ. (egwu obi ụtọ) - Lekọta mkpịsị aka gị, Lincoln - Nke a dị mma ile anya. (mkpu) - Ow! - Lee anya na nke a, Titan.
Jide nke ahụ, Lincoln, Ezuru igwe kwụ otu ebe Batman chere na ọ mere ya (ọchị), ọ mere n'ụzọ ahụ. Nke ahụ anaghị arụ ọrụ. Adịghị mma. (chuckles) Kryptonite Evolution. Gaa! (upbeat music) (hammering) Plastikọs meghere, naanị ya nwere plastik gbara ya gburugburu, mana iguzosi ike n'ezi ihe ka siri ike nke ọma, ugbu a maka ule kachasị sie ike niile.
iwe iwe megide onye na-agba ígwè
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe, Njikọ? - Uh, nkeji atọ. - Nkeji atọ? Ana m ekwu ihe na-erughị 30 sekọnd. (Joy music) agbagha, kwụsị ya.
Kwụsị oge. Ọ bụghị naanị na m mere mbepụ, m bebiri akụkụ abụọ ya ma bepụ akụkụ niile ka ị nwee ike ịga mgbe ahụ, ọ ga-abụ na ọ dị ọkụ, ka anyị hụ na ọ dị ntakịrị ọkụ. Yabụ ị nwere ike ịga otu a. - Ụzọ adịghị! - Wepụ ya. - Ogologo oge ole ka nke ahụ dị? - Lelee etu o si ekpo ọkụ! M na-egbupụcha ihe niile.
Lincoln, ogologo oge ole ka i chere ọ ga-ewe? - Nke a na-ewe 15 sekọnd. - 36 sekọnd. - Chaị, ọ dị mma. - 36, ekwuru m, 36-26 sekọnd. (Joy music) Anyị na-na na na, ma ọ bụghị nke na nnukwu ụlọ.
Nke ahụ mara mma ma na ọ gbazee, mana ị nwere ike ịpụ ya n'ụgbọala ahụ? M ga-enwe nke abụọ bee a otutu (upbeat music) ọganihu, nke ahụ bụ ihe anyị kwesịrị mere site na mmalite. Emebiri m nke abụọ m na mberede. Are bụ mmeri.
Anyị amụtala na enwere mkpọchi dịka abụọ ndị a na-agbaji ngwa ngwa site na naanị ihe ole na ole dị ka ụfọdụ, ụfọdụ ndị siri ike karị, dị ka nwoke a ma ọ bụ nke a. Ha kariri oru karie ka o diri gi obere. Onye na-egwe ihe nkuku nwere ike belata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpempe ígwè ọ bụla, ụdị mkpọchi ọ bụla.
Anyị họọrọ SimpliSafe. SimpliSafe bụ nnọọ irè na ntụkwasị obi nke na-edebe ebe obibi gị mma. A na-enyocha ihe niile 24/7 site n'aka ndị ọkachamara ga-akpọ gị ma ọ bụrụ na mberede ma zipụ ndị uwe ojii ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ọ dị mfe iji ma kensinammuo. Emere m ya na obere oge. Anyị ga-ewu ụlọ na n'afọ na-esote entallọ mgbazinye nke anyị bi na ya ugbu a, ekwela ka anyị tinye kposara na mgbidi.
Ihe mmetụta niile dị iche iche, ndị nyocha ahụ, ha niile nwere ike iji akwụkwọ mmado na-abụghị mgbịrịgba ọnụ ụzọ, mana na mgbịrịgba ọnụ ụzọ ahụ enwere m ike iji oghere ndị dịlarị site na mgbịrịgba ọnụ ụzọ ọdịnala. Ugbu a na SimpliSafe anyị nwere mgbịrịgba ọnụ ụzọ nke na-edekọ onye ọ bụla gosipụtara, ma ha pịa mgbịrịgba ọnụ ụzọ ma ọ bụ na ha abanyeghị, anyị ahụlarị ya. Ọbụna anyị nwere ihe mmetụta maka carbon monoxide ma ọ bụ maka mmiri mmiri na ebe dị iche iche ọ ga-enyocha ma anyị nọ n'ụlọ ma ọ bụ na anyị anọghị.
SimpliSafe nwere ọnụ ahịa ziri ezi na nke eziokwu na enweghị nkwekọrịta ma ọ bụ ụgwọ zoro ezo ka ị ghara ịbanye na nkwekọrịta nkwekọrịta ogologo oge maka usoro nchekwa gị. Ma ọ kwadebere maka ọnọdụ kachasị njọ mgbe WiFi gị dara ma ọ bụ ike gị ga-apụ na atụmatụ ndị masịrị m, dịka ịnụrụ obere chime n'ime isi ụlọ na-agwa m otu n'ime ọnụ ụzọ meghere. Ọ dị ka atụmatụ ndị a na-eche echiche n'ezie dị ka, hey, ọnụ ụzọ gị mepere, gaa, mechie ọnụ ụzọ gị.
Yabụ ma ị na-agbazite ụlọ ma ọ bụ nwee ụlọ, ana m akwado SimpliSafe, ọ arụ ọrụ dị ukwuu maka ezinụlọ anyị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịga na simplisafe.com/whatsinside wee nweta ozi niile mado njikọ ahụ na nkọwa ahụ.
Mana nke a, ee, mara mma. - Mee ka anyị mata n’okwu nke igwe kwụ otu ebe kachasị amasị gị na nke ị ga - azụta n’ikpeazụ? (Obi ụtọ dị egwu) Ya mere, ọ dị ka onye ohi na-abịa n'ọnụ ụzọ gị, ị hụrụ, enwere m ike ịhụ ya kpamkpam, ọ na - eburu ya, ọ bụ lincoln. (n'ọnụ ụzọ na-ada ụda ugboro ugboro)
Kedu ihe bụ mkpọchi kacha mma maka igwe kwụ otu ebe?
Mkpọchi Igwe kacha mmanke 2021: O siri ike ma bara uru
Abus Granit X-Plus 540. Nakacha mmaniilemkpọchi igwe kwụ otu ebe, nke ụdị ọ bụla, dị taa nwere ike ịbụ Abus Granit X Plus 540.
Kryptonite Kryptolok Ọhụrụ-U.
Kryptonite Kryptolok 955 Obere.
Izu okwute igwe gị na ugwu gị bụ ihe kachasị njọ nke nwere ike ime onye ọ bụla n’ime anyị na-agba ịnyịnya ugwu, ọ bụrụ na ị kpọchie igwe kwụ otu ebe n’ihu ọha, ị ga - aka mma ijide n’aka na ọ dị n’ezie. Ugbu a, anyị ga-egosi gị otu igwe ngọngọ ugwu ahụ dị ma anyị ga-egosi gị otu ị ga - esi mee igwe gị dị oke nchebe ma nwee nchebe. (Hissing) (mma ịmụcha mkpọtụ) Ọbụlagodi ịnya igwe kwụ otu ebe gị, ọ nweghị nsogbu.
Mkpọchi ọ bụla nwere ike ịbụ teknụzụ ka a ga-ahụ ka ọ gbajiri, ma ọ bụ bepụ, gbarie, kụrụ ma ọ bụ fụọ. Isi ihe dị n’igwe gị na-ezu ohi bụ otu ụzọ dị mfe isi hapụ ya onye ohi. Ya mere, m ga-anwale ihe ebe a.
N’ezie m ga-anwa ịzu ohi ịnyịnya ígwè m iji gosi gị ihe ọ bụla. Ka anyị hụ ka o si arụ ọrụ. Nwere ike ịnọ na-eche ihe kpatara m ji yi uwe ojii na-acha odo odo ma ọ bụghị, dịka ọmụmaatụ, ọchịchịrị gbara ọchịchịrị, nke a na-amaghị ama.
Nzube m bụ na ndị ohi achọghị ịma. Imeghe bụ iwu kachasị mma. Ha na-agaga na ihe obula ha choro, ha we were ya.
Echere m na m ga-anwa ime otu ihe ahụ. (quirky music) (mkpọrọhịhị) Ya mere, ụsọ oké osimiri ahụ mara mma ịbanye ma zuo ohi nke igwe kwụ ọtọ m Na-eme ihe n'eziokwu, ọ dị mma nke mere na ọ dị ntakịrị ịkọwa: M ji mkpọchi jọgburu onwe ya maka nke a na ndị na-egbutu ya, ha dị mma maka 8mm stud siri ike ọrụ. Mana isi ya bụ, Achọrọ m igosipụta na m nwere ike ịga igwe kwụ otu ebe, ọ nweghị onye lebara ihe ọ bụla anya.
N'ezie, enwere ọnọdụ dị iche iche maka nke a ma ọ nwere ike ị hụla Casey Neistat na ọwa YouTube ya ka ọ na-esi eme mkpọtụ ma ọ naghị adọta uche ọ bụla. Ma m chọrọ iji mesie okwu ahụ ike, ọ bụ banyere ịnya igwe n'ihu ọha. Yabụ ihe ọ bụla ị mere, ị ga-enweta ya nke ọma.
Ya mere, ka anyị laghachi studio na lelee ụfọdụ ezigbo ji akpọchi tupu anyị na-egosi gị otú ị na-eji ecent àgwà mkpọchi. Ugbu a, ị ga-atụle ego ole igwe kwụ otu ebe bara uru. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị hụrụ n’anya n’ezie, mgbe ahụ ị ga-achọ ilekọta ya.
Yabụ, n'okwu metụtara, narị poun ole na ole maka mkpọchi abụghị nnukwu ego ị ga-eji. Ma i nwere ike imefu £ 10 na mkpọchi. Ọ dịịrị gị kpam kpam.
M ga-eji oge kachasị ego ga-ekwe omume ma nweta mkpọchi kachasị mma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ mkpọchi, na-akpọrọ gị site n'ụdị mkpọchi dị na ahịa ma mụta ihe dị mma na ihe na-abụghị. Ka anyị leba anya na mkpọchi D-kpochapụwo. Ya mere, ndị a bụ ndị a maara n'ezie dị ka mkpọchi igwe kwụ otu ebe nke nwere profaịlụ nke D, nke ọma mgbe ị na-etinye ya n'akụkụ ya.
Nke a pụrụ iche bụ nke ABUS mere. Anyị nwere nhọrọ ebe a ka ị wee chọpụta, site na ụdị dị iche iche. Anyị nwere ụfọdụ mkpọchi kryptonite, anyị nwere mkpọchi ABUS na anyị nwekwara ụfọdụ hiploks.
Onye ọ bụla n’ime ha nwere quirks nke ha na ụdị onwe ha, nke dabara ndị ọrụ dị iche iche, nke a bụ granite, nke a dị oke arọ. Ọ bụ a n'ezie arọ mkpọchi. Ọ dị mma maka ịkpọchi ịnyịnya ígwè gị n'ebe ọ bụla, na-eguzogide ọgwụ, ihe niile.
Ma nsogbu bụ na ọ bụ nnọọ ike. Ọ bụghị ụdị mkpọchi ị ga-achọ ịrịgo na igwe kwụ otu ebe gị ma achọghị n'ezie iburu ya na akpa gị. Ya mere, ihe ndị a bụ ihe iji tụlee ụdị mkpọchi ọ bụla.
Ikekwe nke a ga-abụ ntọala kachasị mma ị nwere ike iji n'ụlọ, ọ bụ ezie na anyị na-ekwukarị na mkpọchi agbụ dị mma n'ụlọ n'ihi na enwere ike iji ha mee ihe. Ndị a nwere ike ịdị mma ma ọ bụrụ na ị kpọchie igwe kwụ otu ebe na ebe na-adịgide adịgide kwa ụbọchị, dịka ọmụmaatụ n'ọdụ ụgbọ oloko, ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme njem, ọ bụrụ na ịnwe igwe kwụ otu ebe na ọrụ gị ma ọ bụ na-arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ. Nwere ike ịhapụ nke a n'èzí, ebe ha na-eguzogide corrosion na n'ozuzu ọ dịghị ihe megidere mkpọchi dị otú ahụ.
You nwekwara ike ịchọpụta ihe pụrụ iche banyere mkpọchi a, granite, nwere profaịlụ nwere akụkụ anọ na profaịlụ na-eme ka ọ bụrụ nke na-eguzogide ọgwụ dịka ị nwere ike belata akụkụ abụọ, ị nweghị ike belata otu wee gbanwee kpamkpam. Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ị gafee ihe ahụ dị oke egwu, ị bụ ụdị dike n'ihi na nke ahụ bụ ụdị mkpọchi siri ike. Mana mkpọchi D na-abịa nha dị obere karịa nke a.
Ihe dị mma banyere obere nha bụ na ha nwere obere obere. Nke a nwere eriri belt. O sitere na Hiplok, ụlọ ọrụ na-ahụ maka mkpọchi obere, yabụ ọ bụ echiche mara mma.
Nke a bụkwa oke mkpọchi nchebe. Ejiri Sold Secure Gold, nke bụ isi kachasị dị elu, ị nwere ike nweta mkpọchi. Verylọ nchekwa dị mma, ọ dị mma ma sie ike.
Ruo n'ókè ụfọdụ, ọ dị ntakịrị ka nke a, ọ bụ ezie na ọ ka sie ike iji igwe kwụ otu ebe dabere na ebe ị mechiri igwe kwụ otu ebe, ọ na-eguzogide ọgwụ n'ọtụtụ ụzọ ndị ohi nwere ike iji gbutuo. cam mkpọchi, ị gaghị enweta otu na mkpọchi dị ka nke a. Ọ bụrụ na ịnwere ike iji ya na igwe kwụ otu ebe na ebe ọbụla ịgbachi igwe kwụ otu ebe, ọ nwere ike bụrụ ezigbo echiche maka gị.
Yabụ ị nwere ike ịnweta nhọrọ ndị ọzọ kọmpụta ọbụlagodi igodo ọhụrụ. Nke a sitere na Kryptonite, dịka ọmụmaatụ, nwekwara mgbatị. Yabụ naanị gosipụtara na ị nwere ike iji nke a n'ụzọ dịtụ obere, agbanyeghị na ọ mara mma.
N'ihi ya, o nwere uru nke nnukwu mkpọchi na obere, obere kọmpat. Na-enweta ụfọdụ nhọrọ nke na-abịa site na ndọtị eriri. Ọ bụ echiche dị egwu.
N'ime ụwa dị mma ịchọrọ itinye isi ihe gị na ihe ahụ ọkacha mma ma ọ bụrụ na ịnwere ike ijikọ wiil gị n'ụzọ ọ bụla ịkwesighi iwepu ha na igwe kwụ otu ebe. Yabụ na ị nwere ike ịbawanye nchebe ị nwere site na ịnwekwu igwe gị. Ọ dị mma, lee, anyị nwere ụfọdụ azịza maka ndị na-aga njem ma na-achọkarị ntọala kọmpat.
Ya mere ndị a bụ mpịachi akpọchi na dị ka niile mkpọchi, ị ga-esi ndị a dị iche iche ụkpụrụ. Ya mere, nke a bụ n'ezie a mara mma mfe otu. Nnọọ ọkụ, ị nwere ike itinye ya n’azụ gị, ọbụlagodi n’akpa gị, ọ na-enye gị ezigbo nchekwa.
Ma ha na-emekwa ụdị nsụgharị dị oke egwu nke otu ihe ahụ siri ike, dị oke irè na n'ihi ụdị ha, ị gaghị ejedebe ebe ị nwere ike ịgbachi igwe kwụ otu ebe, nke anyị ga-abanye na ya n'isiokwu ahụ na nke ahụ dị ezigbo mkpa. Ikwesiri ịma ikike nke mkpọchi, nhọrọ dị mfe ebe a, tupu anyị agafee mkpọchi agbụ. Ikwesighi iji ihe dika nke a n'onwe gi.
Ndị a nwere ike ịkwatu ngwa ngwa. Ha dị mma maka iji eg.
B. na igwe kwụ otu ebe nke ihe eserese gị na-eme ka ịnwe igwe kwụ otu ebe gị. Ndị a pụrụ iche USB agbatị bụ nnoo metal cable agbatị.
M n'ezie na-ebu ole na ole n'ime ndị a oge niile, naanị na akpa m, na ọrụ m kwa ụbọchị, n'ihi na ha nwere ike ịba uru dị ukwuu maka obere kọfị ndị ahụ na ebe ị ga-ahụ igwe kwụ otu ebe, ch igwe kwụ otu ebe, ị nwere ike ịchọ tufuo nke abụọ. Ma ghara iji mkpọchi ọkụ dị ka nke a ma ọ bụ ọbụlagodi mkpọchi a sitere na ABUS, ejikwala nke ahụ mee ihe ọzọ na mkpọchi echekwara echekwa. Ihe ndị a bụ ntakịrị ntakịrị iji were gị mgbe ị na-agba ịnyịnya, dịka obere mgbochi, mana igbochi bụ isi ebe ahụ.
Ugbu a n'ezie enwere mkpọchi agbụ. Ugbu a ihe ndị a dị otu tọn. Ha siri ike, ha bụ nke ígwè siri ike, ha nwere usoro mkpọchi na-apụnara mmadụ ihe, ha na-egosi acid, ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile na-eguzogide ọgwụ.
Ma ntaramahụhụ maka iyi mkpọchi dị ka nke a bụ na ha na-atụle otu tọn. Ọbụna n'ime akpa azụ ha na-efegharị gburugburu ebe niile ka ị kwesịrị iche echiche nke ọma ebe ị ga-eji ha. Ọ bụ ya mere m ji akwado mkpuchi mkpọchi maka iji ụlọ ma ọ bụ ma eleghị anya, ị ga-adịgide adịgide dị ka ị ga-eji ihe dịka mkpọchi D.
Mana enwere ọkara ụlọ. Ugbu a Hiplok na-emechi mkpọchi ị nwere ike iyi dị ka eriri. Hem na ọkwa dị iche iche.
Nke a bụ ụdị dị mfe, nke a kwekọrọ na ere echekwara. Ma ha nwekwara oke dị arọ, dịka ọkọlọtọ ọla edo. Nke a bụ akụkụ dị oke egwu nke kit ahụ, mana usoro mkpọchi n'onwe ya nwere ike eyi dị ka eriri eriri ma wepụta ihe a n'úkwù gị.
Ọ nwere nkọwa na-egosipụta nke mere ị nwere ike iji igwe kwụ gị n'ukwu gị were ya ma kwenye na ọ bụ mkpọchi dị arọ mana ozugbo ọ dị n'úkwù gị, ọ bụ ihe ijuanya na ọ dị mma ịmara na ị nwere agbụ siri ike dị oke ma na anaghị egbochi gị ebe ị nwere ike iji ha. Y’oburu na igbachi igwe kwụ otu ebe n ’onodu di iche, ihe nwere ike bụrụ gi ezigbo ihe. Kedu ihe nchebe ị nwere gbasara mkpọchi, ebe ịchọrọ ịgbachi igwe kwụ otu ebe dị oke mkpa.
Iji maa atụ, ọ bụrụ na ị gbadata obere wara wara ebe a ugbu a, ị nwere ike iche na ụdị ebe ahụ dị mma. Nke a bụ ọmarịcha ụgbọ ala echedoro iji kpọchie igwe kwụ otu ebe na. Otu nsogbu dị na nke a bụ na ọ si n'okporo ụzọ a kụrụ akụ ka nke a wee nye onye ohi ọ bụla ohere ịnweta ọrụ na mkpọchi gị.
Ọ bụrụ n ’ị nwere mkpọchi dị mma dị mma ha ga - eji igwe na - egweri ihe, ihe ọ bụla na - eme mkpọtụ. Yabụ ọ bụrụ na ị mee ka ọ dịrị ha nfe site na ịgaghị ịnọ ọha, nke ahụ adịghị mma. Ya mere, ka anyị lelee ụfọdụ ihe atụ ndị ọzọ nke ebe iji zere loops loops ebe a ọtụtụ mmadụ na-eji ebe a igbachi igwe kwụ otu ebe ma ị nwere ike iche na ọ bụ n'ezie ezigbo ebe igbachi igwe kwụ otu ebe.
Mana ị mejọrọ kpamkpam. Nke a bụ n'ezie ebe dị njọ n'ezie ịgbachi igwe kwụ otu ebe na otu ihe kpatara ya, enwere ọtụtụ igwe kwụ otu ebe ebe a, ọ bụ ebe dị mfe maka onye ohi nkịtị ka ọ kwụsị ma nwaa aka ha na igwe kwụ otu ebe gị ma dabara na omume ahụ. Ihe kachasị ọhụrụ anyị nụrụ na GMBN na GMBN Techis bụ na ndị ohi ga-anọchi ebe ahụ ga-abụ ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na-ebugharị, yabụ na ha nwere nnukwu akpa nnyefe ma ha rute ebe ndị dị ka nke a, ha na-ehulata iji mee ka ịmeghe igwe kwụ otu ebe, mana ha na-anwa n'ezie bolt egbutusị ma ọ bụ ihe ọ bụla ha nwere na mgbe ahụ dị nnọọ ịnyịnya pụọ ​​na kwuru igwe kwụ otu ebe.
Dịka m kwuru na mbụ, imeghe bụ amụma kachasị mma. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ndị ohi na-eme. Ọzọ, ka a mata ebe ndị ọzọ na-enyo enyo ịkpọchi igwe kwụ otu ebe, ọdụ ụgbọ oloko bụ ezigbo ihe atụ.
Mgbe ụfọdụ a manyere gị. Y’oburu n’icho imechi igwe kwụ otu ebe di nso n’ọdụ ụgbọ oloko, otu n’ime ndi ahu kwesiri ịgba mbọ hụ na ọ di nso CCTV ebe a ga-ahụ ya. Ihu ọma, ịchọrọ n’ezie onye ohi na-enweghị atụ iji nwee ntakịrị ohere ịrụ ọrụ na igwe kwụ otu ebe gị, ọ bụghị igwe kwụ otu ebe gị.
Nke ahụ bụ aha egwuregwu. Mgbe ị na-akpọchi igwe kwụ otu ebe na etiti obodo, enwere ihe ikpeazụ ị ga-ebu n'uche: kpọchie igwe kwụ otu ebe gị mgbe ị na-akpọchi ya maka mgbede, dịka ọmụmaatụ, n'akụkụ ebe ọ bụla nwere ndụ abalị na-eme mkpọtụ.
Ugbu a, anyị niile ahụla igwe kwụ otu ebe. N'otu oge, ha na-ekpochi na zọda, anyịnya igwe hulatara, nke ahụ bụ n'ihi na ha dị mwute ikwu na a ọjọọ ebe. Ọ bụghị onye nwe ya kpatara, ọ bụ ndụ abalị na nsogbu na ihe niile nwere ezi uche ebe ị na-ekpochi igwe kwụ otu ebe gị.
Ugbu a na m bụ, nke a bụ n'ezie a mara ezigbo mma ebe. Yabụ ị nwere handrails mara mma ma sie ike, nke pụtara na enwere ọtụtụ isi ebe ị nwere ike igbachi igwe kwụ otu ebe gị. Nwere ike nweta ya ọfụma ma mechie site na ibuli lash ahụ n'elu igwe.
Ọ dị nso n'okporo ụzọ, yabụ enwere okporo ụzọ mgbe niile nke ga-ewepụ onye ohi n'ihi na ị nwere ike ịhụ n'azụ m, ọtụtụ mmadụ na-agagharị na ezigbo onye na-agba mbọ maka ịnya igwe kwụ otu ebe. Ka anyị a ngwa ngwa anya na nhọrọ na ụdị na ụzọ ị ga-mezue a igwe kwụ otu ebe. Aga m eji nke a dị ka ezigbo ihe atụ.
N'ebe ọ bụla ịgbachi igwe kwụ otu ebe, enwere ọtụtụ nhọrọ na mkpọchi ị họọrọ na otu ị ga-esi jiri ha. Ezigbo mma igwe, enwere m D-mkpọchi na-agagharị n'okirikiri, a na-agbanye gburugburu wiil azụ n'azụ igwe kwụ otu ebe. Nke ahụ bụ isi dị ka ọ na-enweghị ike iwepụ ya na igwe kwụ otu ebe.
Enwekwara m eriri nche ọzọ, nke a bụ eriri Kryptonite, agbagoro m gburugburu na ndụdụ na ụkwụ ihu, laghachi na ya ma banye mkpọchi ahụ. Ya mere igwe kwụ otu ebe ahụ dị ezigbo mma n'oge a. Enwere m ogwe aka nke na-adabere naanị n'elu ka o wee nọrọ ọdụ.
Echere na ọ dịghị onye ga-egbochi nke ahụ. Ọ bụrụ na ịnweghị gị ndọtị ụdọ ugbu a, mana ị nwere ọmarịcha, nnukwu, mkpọchi ogologo, aga m egosi gị obere aghụghọ dị jụụ nke m hụrụ n'anya iji naanị tinye mgbakwunye nchekwa. Nke a anaghị arụ ọrụ oge niile ma ị nwere ike ịkpasu ndị mmadụ iwe ma ọ bụrụ na ị na-eme nke a na ụfọdụ ebe, mana igwe ọrụ a na-arụ ọrụ nke ọma maka ya.
The igwe kwụ otu ebe bụ n'elu okporo ígwè, n'ihi ya, ọ ihu ọma kpọgidere n'elu elu nke a ụgbọ ala n'elu a ụzọ na-eji a mkpọchi ka e meere ya na ya n'otu oge, dị nnọọ ka ị ga na n'akụkụ ụzọ. Ma eziokwu ahụ bụ na igwe kwụ otu ebe dị n'akụkụ nke ọzọ nke igwe ndobe ahụ na-eme ka ọ sie ike karị ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ siri ike ịrụ ọrụ, ọ ga-ewe oge iji zuo igwe kwụ otu ebe, ọ ga-abụkwa na ọ ga-arụ ọrụ na ya.
N'ihi ya, ọ bụ ọmarịcha obere mbanye anataghị ikike m na-eji ezi ọtụtụ. Ugbu a anyịnya igwe kwụ otu ebe dị ka nke a wuru kpọmkwem iji kpọchie igwe kwụ otu ebe na nke a bụ n'ezie ebe zuru oke. Ọ bụ ebe mara mma nke ukwuu, enwere ọtụtụ ebe obibi ọha na eze, ọtụtụ mmadụ na-anụ kọfị na sandwiches na ihe ndị yiri ya.
Yabụ na ọ bụ ebe ọjọọ maka onye ohi iji oge buru ibu rụọ ọrụ igwe kwụ otu ebe. Ahụla ya ma ọ bụ na ọ hụrụ ka o zuru igwe kwụ otu ebe. Yabụ nke a bụ nnukwu ebe.
Mana enwere ụfọdụ ihe ị ga-ebu n'uche. O doro anya na ị nwere mkpọchi gị, yabụ obere mkpọchi dị ka nke a ga-arụ ọrụ ahụ n'ụzọ zuru oke. Ikwesiri ijide n’aka na ị na-anya ụgbọala gị ka ọ ghara ịmịcha ma wepụ ihe agba gị.
Ugbu a, m na-achọ itinye nke m na crank; J ihe atụ mgbe m buliri m na azụ ebe a ọ na-eburu ibu nke igwe kwụ otu ebe na pedal na crank na m nwere ike itinye mkpọchi ahụ ma jide ya na post ya mere ọ mara mma nke ukwuu igwe kwụ otu ebe ga-adị mfe ngwangwa . Ọ dịịrị gị ma ịchọrọ itinye ihe a ma ọ bụ na ịchọrọ ijikọ ya na igwe kwụ otu ebe nwere mgbatị mkpọchi, mgbe ị rutere na ọkwa dị otú ahụ na naanị ohere dị bụ akụkụ nke ọzọ nkerịrịrịrị? Lee ụdị igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na ọ bụ ochie chunk dị ka nke a, lee ka esi kpọchie ya na otu esi emeso ya.
O yikarịrị ka ị ga-ahapụ igwe kwụ otu ebe gị? ilekọta nke gị nke ọma ka ọ bụ na ọ bụghị nke gị mgbe ha mepere nke gị? N'ezie ọ bara uru ịtụle. N'aka nke ọzọ, agaghị m ahụ igwe kwụ otu ebe ọfụma. Ọ bụ njem site n'ile ya anya, ọ nwere mkpọchi Kryptonite ma nwee eriri ndọtị, nke na-egosi na onye nwe igwe kwụ otu ebe na-elekọta igwe kwụ otu ebe ha ma na-atụ anya na ọ ga-elekọta nke gị.
Yabụ were nke a n'uche mgbe ị gụnyere nke gị, mana otu iwu na-emetụta. Gaa maka nchekwa kachasị ị nwere ike. N'okwu ahụ, enwere m ike iji Hiplok n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Enwere m ike iji mkpọchi Kryptonite D, enwere m ike iji ezi ahụ niile wee jiri mkpọchi ABUS ahụ, mana nke ahụ bụ ihe dị arọ karịa ịgagharị. Have ga-enwerịrị ihe ga-adịrị gị mma. Mana maka ebe ịgbachi igwe kwụ otu ebe, ebe a bụ nnukwu ebe. (Bike wheels purr) Ọfọn, ihe m na-emetụbeghị aka n'isiokwu a bụ ụzọ ndị ohi si ahọrọ mkpọchi.
E nwere ọtụtụ ụzọ Gold Secure dị mma. Ọ dịkarịa ala ruo ebe ị nwere ike iwepụ igwe kwụ otu ebe gị ngwa ngwa, nke a bụ ọrụ na-ewe ntakịrị oge. Nke ọzọ bụ na i nwere ike ifriizi ha ma kụrie hama, mana ọrụ siri ike nke Shackle In The Castle ga-eguzogide nke ahụ.
Kedu nke na - ahapụ nhọrọ atọ ọzọ: onye na - ebuli karama, a na - eji ihe na - eburu karama mee ihe n'ụdị D-mkpọchi, na nke a ị nweghị ike ịbanye ebe ahụ n'ihi na nke ahụ bụ mkpọchi kọmpat, yabụ kọmpụta mkpọchi yana ndọtị bụ oké echiche maka obodo mepere emepe. Nnukwu mkpọchi U-ma ọ bụ D-mkpọ, nsogbu ndị ọzọ ị nwere ike ịnwe n'ụdị ọgụ a. Ndị ọzọ bụ ndị na-egbutu ihe nkedo, ndị na-egbutusị agaghị agaru ebe ọ bụla.
Ha ga-acho oke mmadu buru ibu ka ha kpochapu ya. Bolt egbutusị ga-eme naanị eriri. Ọ bụ ezie na ha na-eme, dịka ị hụburu na mbụ, mee ụdọ ka ọ dị ntakịrị butter, n'ezie.
Ya mere kpachara anya mgbe ị na-eji ụdị ihe a. Ikpeazụ Ihọd ga-abụ ihe n'akuku grinder agha N'ezie Buy Ya. Yabụ, na-eme ya n'elu tube ebe ahụ, nke ahụ abụghị ebe dị mma maka nke ahụ.
Yabụ ọ bụrụ na ị ga - eji ihe dịka agbụ dị arọ, gbaa mbọ hụ na agbụ ahụ adịghị nso na ala. Want chọrọ ka ọ dị elu dị ka o kwere mee. Mgbe ọ nọ n’ala ọ nwere ike ịrụ ọrụ na ya Jiri nnukwu ndị na-egbutusị ya na ihe ndị na-egbutu ya.
Have ga-eji nnukwu nkwanye, oge ụfọdụ ịnwe otu ogwe aka n'elu ala ma ogwe aka nke ọzọ na-akwagide ya. Ya mere naanị tụlee ebe mkpọchi bụ mgbe ị na-ekpochi ya na igwe kwụ otu ebe gị. (egwu dị egwu) Ikekwe, ị chọpụtara na enweghị m mkpọchi igwe kwụ otu ebe, ma enwere m kọfị sassy ka m na-agba ịnyịnya Garmin igwe mkpuchi m na ihe dị jụụ banyere ya bụ na mgbe mmadụ nọ igwe kwụ otu ebe na-agbagharị, na-atụ anya na mkpu ahụ ga-akwụsị ma kwụsị m.
Chris! Ọ bụghịdị e-igwe, enyi. Ọfọn, nke ahụ dị mma. M na-agbanyụ ya na ngwa ahụ.
N'ebe a, ị ga-akwụsị ma tinye ihe egwu. N'ihi ya, m tụgharịrị igwe kwụ otu ebe m ma gbanwee ya ka ọ bụrụ Ha rd Gear, n'ụzọ bụ isi ihe na-eme mgbe mmadụ banyere igwe kwụ otu ebe ma malite ịgba ígwè bụ ọ-Chris! Kedu ihe na - eme gịnị ka ị na - eme di ma ọ bụ nwunye? Ọ bụ e-bike. Weghachite ya.
Mụ okorobịa EMBN ahụ, ha na-achọ ezigbo igwe kwụ otu ebe kedu ihe m nwere ike ikwu? (Igwe kwụ otu ebe) Ọ bụrụ na ịchọrọ njedebe ikpeazụ a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka kọfị kọfị ahụ kwụsị, m jiri okpu okpu m dịka obere mkpọchi, m na-etinye ya gburugburu wiil m, ọ bụrụ na mmadụ emee ya, ọ ga-amịpụ ma ha enwetaghị ya tere aka - Ugh! Ya mere, ezighi ezi, Chineke, achọrọ m ka otu n'ime igwe kwụ otu ebe na-enweghị moto ma ọ bụ batrị! - Naanị laghachi EMBN, gaa n'ihu! Ka nke ahụ bụrụ ihe mmụta nye gị. Mana nke oma, ejikwala nke obula. Ahapụla onwe gị n’ihe ndị a.
Ihe ị chọrọ n'ezie bụ ezigbo, mkpọchi siri ike na mkpọchi igwe kwụ otu ebe gị nke ọma. Ọ dị mma, egosila m na ebe ọ bụla ị mechiri igwe kwụ otu ebe gị abụghị ihe a na-apụghị imeri emeri, mana ịnwere ike iwelata ihe ọghọm ndị ahụ site na iji ezigbo mkpọchi mara mma wee gaa ma họrọ ebe ị mechiri igwe kwụ otu ebe. Olile anya na nke a enyerela gi aka.
Maka ederede ole na ole n'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ otu esi etinye ntọala arịlịka nke m chere dị oke mkpa maka gị, pịa ebe ahụ maka ụdị ndụmọdụ nchekwa niile ị nwere ike iche. CCTV, mkpuchi, ihe niile ahụ. Enwere m olile anya na ịchọta edemede a.
Dịkarịa ala, enwere olileanya na ị ga-enweta ozi dị mma maka gị. Ya mere, nye anyị mkpịsị aka aka wee pịa bọtịnụ ịdenye aha na n'ezie mgbịrịgba obere ngosi ka ị wee nweta ọkwa oge ọ bụla anyị buliri otu isiokwu. Nri, aga m arụ ọrụ.
Ka ahụ ma emechaa. (Mkpọtụ) N'ihi ya, m tụgharịrị igwe kwụ otu ebe m, gbanwere ya ka ọ bụrụ ọkpọka, yabụ ọ bụrụ na mmadụ abanye na ya, a ga-agbagha ya niile, ha agaghị- (igwe kwụ otu ebe) Chris! Chris! - Ugh, ya mere adịghị mma, Doddy! - Ọ bụghị ọbụna e-igwe kwụ otu ebe, enyi! (Iwe iwe) (ọchị)
Kedu mkpọchi igwe kwụ otu ebe enweghi ike igbutu?
Kryptonite U-akpọchidị mma karịa USBakpọchin'ihi na ha fọrọ nke nta ka-agaghị ekwe omumeebipụsite na. USBakpọchindị dịtụ mfeebipụsite na ebe obu na eriri USB ahu adighi nma. Ha dị mma nke abụọakpọchiiji kpuchido wiil na ngwa gi, mana u-mkpọchidị mkpa iji chebe gịigwe kwụ otu ebe.
Kedụ ka m ga-esi mechie igwe kwụ otu ebe n’enweghị nsogbu ọ bụla?
Mgbe nileMkpọchiG .N.Igwe kwụ otu ebenye ihe siri ike apughi ibuli ya elu.MkpọchiG .N.Igwe kwụ otu ebena mpaghara a na-enwu nke ọma nwere okporo ụzọ dị elu. Gbaa mbọ hụ na ịmkpọchinke giigwe kwụ otu ebeenweghị ike igbutu ya.MkpọchiDabere na uru uru mbụ, wee laghachi wheel, na n'ikpeazụ n'ihu wheel.
Gbọ ịnyịnya ígwè na-egbukepụ egbukepụ, ha na-atọ ụtọ, na-adị ọcha, ma na-arụ ọrụ nke ọma maka njem na njem na obodo mepere emepe, ma enwere ego agbakwunyere, ha na-eme ka ọ dị mma, mana dị ka ọtụtụ n'ime gị maara, ha nwere ike ịbụ ihe dị mma maka ndị ohi Ọ masịrị m ịkpọ ha ka ha gbalịa ịkwụsị gị nganga na ọ joyụ nke ịdaba n'aka ndị ohi, anyị ejirila kryptonite jikọọ aka, yabụ n'isiokwu a, anyị ga-agafe ihe ndị a na-eme na ihe ndị a na-eme nke nchekwa igwe kwụ otu ebe. ị bụ maka utinggha na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-aga ụlọ ahịa ma ọ bụ na-eleta ndị enyi, anyị ga-agabiga otu na ebe kachasị akpọchi igwe kwụ otu ebe, otu kachasị mma iji mkpọchi iji chekwaa igwe kwụ otu ebe gị yana ụdị mkpọchi dị iche iche ka ị wee nwere ike ikpebi ihe mkpọchi Igwe na-abata n'ụdị na nha dị iche iche na ụdị dị iche iche nwere uru na ọghọm dị na ya, ọbụlagodi ka ibu anaghị adị mma ugbu a tupu anyị abanye na nkọwa nke otu na ebe igbachi igwe kwụ otu ebe gị, aga m aga karịrị ụdị mkpọchi dị iche iche enwere ike akpọchi ike ka a na-agụkarị maka unbreakabilit ha y yep, nke ahụ bụ okwu m mechara pụta, mana ị nwetara isi, dịka ọmụmaatụ, kryptonite na-agbachi mkpọchi ya n'etiti otu na iri.Ugbu a mkpọchi niile anyị nwere ebe a na-amalite na ise, mana ị nwere ike na nke ahụ packaginghụ nkwakọ ngwaahịa na nchekwa ahụ fim dị na ihe na-erughị ise ka a na-ejikarị eme ihe dị ka ụdị obere mgbochi mgbe ị na-akwụsị kafe na mpaghara ime obodo, ma ọ bụ naanị maka nkwado ndabere? Gị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ị na-eme njem ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ ihe.
Typedị mkpọchi nke mbụ ị kwesịrị ịma gbasara ya bụ mkpọchi D. Ha sitere na ihe dịka D-mkpọchi a emebere maka ime n’ime ime obodo ruo mkpọchi D zuru ezu iji mee ka ndị ohi kachasị ama ama n’obodo mepere emepe chee echiche banyere obodo Gotham mgbe nkọcha gafere na ị nwere echiche ziri ezi n'etiti agbanyeghị, a na-ewere mkpọchi D ka ọ bụrụ mkpọchi igwe kwụ otu ebe kachasị ike ma dị nchebe ị nwere ike iji ma ha dị iche na ike na ụdị anwụ ngwa ngwa na ike na ịdị arọ yana di na nwunye atụmatụ ndị ọzọ na nke a gosipụtara na ọnụahịa ahụ. , ihe dị ka nke a dị oke ọnụ karịa ihe na-adịchaghị ọkụ ma na-adịchaghị mfe D-akpọchi ndị a dịkwa iche iche ka ị wee nwee ike ị nweta obere dị ka nke a na ndị buru ibu dị ka ndị a, ma ha ahaziri ma ha agbakwunye igwe kwụ otu ebe gị na ihe na-agaghị agbanwe agbanwe ma ọ bụ gị eku ọzọ akụkụ nke igwe kwụ otu ebe dị ka wiil ma ọ bụ knockouts f remotely na iji a nkịtị tactic na ọ bụ ezi tactic iji a D-mkpọchi na Nchikota na ọzọ mkpọchi dị ka a USB mkpọchi iji nwetara n'akụkụ ndị ọzọ nke bike lik e wiil na ihe ọ bụla ọzọ ị nwere na igwe kwụ otu ebe gị karịa mkpọchi mkpọsa na ha nwere ike ịmasị mara mma ịgagharị ma legharịa anya na akpa, mana ha enweghị ntụkwasị obi ugbu a ka ha na-eji usoro mkpọchi dị iche iche abịa. Nchikota mkpọchi ma ọ bụ mkpọchi igodo ma ọ bụ ndị nwere loops ndị a haziri maka iji ya na mkpọchi dị iche.
Ọ na-abụkarị mkpọchi eriri D-mkpọchi nwere ike ịkwụsị onye ohi nkịtị, mana ha enweghị ntụkwasị obi karịa D-Lock na bolt cutters. Ọrụ ọsọ ọsọ nke mkpọchi USB, ha na-abụkarị eriri igwe dị ka nke a nwere ụdị mkpuchi plastik na n'èzí iji gbochie corrosion n'ihu anyị nwere agbụ mkpọchi maa ihe ị dị mma na ọzọ ha nwere dị iche iche kpochidoro usoro a onye nwere Nchikota mkpọchi ma e nwekwara ndị nwere naanị igodo na ha na-abịa dị iche iche shapes nha na-eme ha n'ozuzu ọzọ ala karịa mkpọchi USB mana esighi ike karịa mkpọchi D-Ha Ha nwere uru karịrị D-mkpọchi, agbanyeghị, na ha nwere ike ị nwere ike ị ga - agagharịrịrịrị n'ihi agbụ na-echekwa akụkụ dị iche iche nke igwe kwụ otu ebe gị, dị ka D-mkpọchi bụ ụdị nke static na isiike, nke nwere ike mgbe ụfọdụ ịbụ a obere ihe siri ike iji na ndị ọzọ ụdị igwe kwụ otu ebe Castle na anyị nwere, ole na ole More ọsọ karịa ndị ọzọ anyị gosiri gị bụ a mpịachi mpịachi na anyị nwere ebe a ugbu a. Gbachi akpọchi nwere ike ịba uru dị ukwuu n'ihi na ha nwere ike iwepụ obere ohere na akpa gị mgbe ị na-ebu ha karịa D-mkpọchi n'ihi na ha na-agbagọ oge ọ bụla na nke a nwere ike ịba uru dị ukwuu, dabere na ebe ị na-ekpochi igwe kwụ otu ebe na ụdị igwe kwụ otu ebe ị na-agbachi, a na-ahụta ha dị nchebe karịa eriri mana ọzọ enweghị ntụkwasị obi karịa ntụkwasị obi D-ntụkwasị obi n'ihi na ha nwere ike iguzogide ndị na-egbutu ihe nkwụsị nke ọma tungsten-tipped saw or an angle grinder can make short work of the isiokwu nke nke dị elu ọgwụgwụ nke akpọchi ị ga-ahụ atụmatụ thicker obi tara mmiri ígwè n'àkwà abụọ bolts na elu burglar-àmà mkpọchi orù nakwa dị ka obere oghere na mkpọchi shank ihe ndị a na-eme ka o siere onye na-ịgbawa na arụrụala ike akpọchi ma ọ bụ na ala Pry kwụsị atụmatụ ndị a ejikọtara ọnụ ntakịrị apụtaghị mkpọchi ahụ agaghị arụ ọrụ, mana ha anaghị eguzogide onye ohi maara ihe ma ọ bụ na-amanye majeure site na iji nchara warara na obere mkpọchi mkpọchi mkpọchi ma ọ bụ mkpọchi ị jiri dabere na ọtụtụ ihe, gụnyere tinye ụdị igwe kwụ otu ebe ị nwere yana ogologo oge ị ga - emechi ya ị na - eme atụmatụ idobe ya nye gị ihe ndị a niile na - agbakwunye na ihe egwu dị na enwere ike izu igwe gị. ebe dị oke mkpa ebe ụfọdụ nwere ike ịnwe Na-ezu ohi igwe kwụ otu ebe -Bụrụ ebe dị egwu dị ka ọdụ ụgbọ oloko, anyị na-atụkwa aro ka ị dọba igwe kwụ otu ebe gị n'okporo ụzọ dị jụụ dị ka ndị a, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, n'ihi na ebe dị jụụ na ndị pere mpe nọ, enwere ike inye onye ohi ahụ oge ka ọ rụọ ọrụ na igwe kwụ otu ebe. .
Ọzọkwa, chee maka ihe ndị ọzọ, dị ka ịnọdụ ala na kọfị ma ọ bụ ịgagharị na ndị na-ekwo ekwo, nwekwara ike ịdị egwu, ma chee echiche banyere ebe ndị na-adịghị ahụkebe iji kpochie igwe kwụ otu ebe ka okporo ụzọ ndị a bụrụ ezigbo ihe atụ. M ga-agbakwunye igwe kwụ otu ebe na ya, ọ bụghị n'akụkụ a kama n'akụkụ nke ọzọ nke na-apụ n'okporo ámá ebe na-adịghị adọrọ mmasị na-aga E nwekwara onye nche na ebe a kwa onye edobere ebe ahụ Ọ nọ ebe ahụ na maka ọtụtụ n'ime ụbọchị Ohere inweta bụ na ọ bụrụ na onye ohi na-arụ ọrụ na igwe kwụ otu ebe ọ ga-ahụkwa a kama-adọrọ adọrọ mmasị ebe mmadụ na-arụ ọrụ na igwe kwụ otu ebe na kwa a aghụghọ zuru ezu m na-etinye ahụ n'ezie mkpọchi ebe isi bụ na ọ bụghị a aghụghọ zuru ezu n'akụkụ a ma ọ na-eme ka o sikwuo ike ịrụ ọrụ na mkpọchi ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-anwa ma họrọ mgbe niile ijikọ igwe kwụ otu ebe na ihe enweghị ike ịkpụ. Echere m na ọ na-ada ụda, mana ọkwa osisi nwere ike ịdị mma ma dịkwa mma, mana ịkpụ ga-eme obere ọrụ nke a.
Anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ka ị nwee ya dị ka ọkpọkọ ọkpọ ọkpọ. Fọdụ ndị na-akpọchi igwe kwụ otu ebe mgbe ụfọdụ iji kpochapụ ọkpọkọ, mana ha nwekwara ike belata n'ụzọ dị mfe ma ọ bụrụ na ejiri plastik mee ha, ị nwere ike wepụ ha na mgbidi ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie na ihe dị mma iji kpochie igwe kwụ otu ebe gị, ma ọ nwere ike belata ihe ize ndụ nke imebi ndị mmadụ na-aga ije na ya ma mabanye na ya. Enwekwara ụfọdụ ụgbọ okporo ígwè Georgian a ma ama ebe a na-eme site na nkedo na nkuku ma ọ bụ na-ahụ ya ga-arụ ọrụ ngwa ngwa na ya, nke a dị mfe iji belata karịa nchara siri ike ị ga-enweta site na ezigbo mkpọchi.
Agaghị m egosi gị ụzọ kachasị mma iji kpọchie igwe kwụ otu ebe na usoro m ga - eji ma enwere ndụmọdụ ole na ole iji mee ka ọ dị nchebe karịa nke mbụ niile bụ mpaghara dị mma, ọ bụ ụzọ mara mma, ọ bụghị gị mara, enweghi otutu ihe ngosi nke mmebi iwu, gunyere otutu ndi na-agabiga ije, o juputara nke oma na uja, imara otutu otutu ndi mmadu no ebe a ma anyi nwere igwe ugbo ala anyi puru iche ebe a di nma ma di nma ma gi mara na ọ dịghị onye nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè ahụ nwere ike ibuli ya dị ka ọ bụ bollard ma ọ bụ ogwe osisi ha nwere ike belata ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ m ga-agbachi igwe kwụ otu ebe ka ọ baa uru n'akụkụ ya dị iche iche, ebe etiti ahụ bụ ihe kachasị baa uru akụkụ, sotere n'azụ wheel na mgbe ahụ n'ihu wheel otú ị chọrọ ka e meere ya na iji, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, m ga-eji D-mkpọchi iji nwetara ma etiti na n'azụ sec wheel na D-mkpọchi bụ thru Mgbe a na-etinye wiilị azụ na etiti, aga m ejikwa mkpọchi USB dị ka ụzọ nke abụọ iji chekwaa ihu ihu. Naanị gbaba ya site na nkwado D-mkpọchi site na etiti ahụ wee gafere n'ihu ụkwụ wee banye n'ime d-locklike sonext tinye njedebe nke d-lockback na ma ọ bụrụ na ị nwere ike, dozie usoro mkpọchi nke d-igbachi ya ka ọ na - eme ka ọrụ sie ike Kwuo maka ndị buru ibu, ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị mma mgbe ị nwere mkpọchi D-siri ike nke na - agbachapụ agbachapụ mgbe ahụ ebe ị mechiri igwe kwụ otu ebe na - ahapụ ụlọ maka ndị mmadụ inweta ọtụtụ ndị ohi inweta ngwaọrụ ya ha nwere ike imeghe D-mkpọchi ma ịchọrọ obere ohere n'etiti ebe ị na-ekpochi igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe n'onwe ya, ọ bụ ya mere obere mkpọchi D dị ka nke a bara uru na ọnọdụ ndị a. Ọ dị ka ọ doro anya, ọ ga-abụ ihe doro anya nye ọtụtụ gị, mana ahụla m ka ndị mmadụ kpochiri igwe kwụ otu ebe n'ụzọ a n'ime ihe dị ka ihe siri ike siri ike nke na - enweghị ike ibugharị ma ọ nweghị ebe ọ bụla, mana ha kpochiri ya, nke ọ bụ igwe kwụ otu ebe abụghị ihe doro anya na-eme ka ihe atụ mara mma enwere ihe dị ka ụdị nke bollard na ụlọ elu, ị nwere ike ịgbachi ya otu ahụ, ị ​​ga-ebuli ya ozugbo m pụọ igwe kwụ otu ebe, ugbu a ị hụrụ gị emesịa na mgbakwunye na eriri ma ọ bụ kama eriri ị nwere ike iji ụdị mkpọchi ọzọ iji chekwaa ihu ihu ihu ihu na etiti ahụ na nke ahụ nwere ike ịbụ mkpọchi mkpọ ma ọ bụ mkpọchi olu ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ mana ọzọkwa abụghị nke ahụ mkpọchi ahụ gbagoro, nke a na-eme ka ọ dị mfe ịrụ ọrụ kama idobe ya n'ụzọ ahụ n'ozuzu mkpọchi ka mma ọ na-eme ka ọ zụrụ ndị ohi na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ị kpọchie igwe kwụ otu ebe gị n'otu ebe kwa ụbọchị, eg
Dịka ọmụmaatụ, n'ebe ọrụ, ị nwere ike ịgbachi mkpọchi dị otú ahụ na akwa igwe kwụ otu ebe ka ị ghara ịmachi ha oge ọ bụla n'ihi na mkpọchi dị ka nke a dị oke nchebe, mana ha dị oke arọ. Ha nwere mkpuchi pụrụ iche nke ị nwere ike ịdọrọ iji gbochie mgbochi mmiri na mmebi ihu igwe na mkpọchi ahụ, nke mere ka ha dị mma maka ụdị ebumnuche a, ọkwa nke abụọ n'elu akara ike nke onye nrụpụta ma nke a na-ere n'enweghị nsogbu ọ bụla nwere nnwere onwe ule na asambodo nke na-enyocha mkpọchi dabere na ụkpụrụ nke aka ya, n'ihi na nke a bụ oge nyocha naanị nke ndị mkpuchi mkpuchi ghọtara. Na nchịkọta, ị maara otu ị chọrọ igbachi igwe kwụ otu ebe gị, bụ mkpọchi ịchọrọ ịga, kedu etu ị chọrọ ka ọ dịrị na ebe ị ga-aga Ihe niile anyị tụlere n’isiokwu a, ị kwesịrị ịdị mma na ụzọ gị iji na-echekwa igwe kwụ otu ebe gị nke ọma tupu ị kpọchie ya na oghere ọha ma ọ bụrụ na ị na-aga Ọmụmaatụ, ị nwere oke ọnụ igwe gị dị oke ọnụ.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na edobere wiil ahụ na okpokoro ahụ ebe ndị ohi ga-ewepu ihe niile dị na igwe kwụ otu ebe ma hapụ gị wiil na okpokoro ahụ. Egwuregwu ahụ bụ ịnwa ịme igwe gị ka ọ ghara ịdị mma n'anya ndị ohi. buru n'uche na anụ ọhịa nwere ike ichu nta, ị gaghị enwe ike imeri ọdụm, naanị na ị gaghị abụ anụ na-adịghị ike na ndụmọdụ ọzọ mgbe ị na-ahọrọ igwe kwụ otu ebe iji rụọ ebe mepere emepe. apụ, ọ dị mma ịnwe igwe kwụ otu ebe abaghị uru, ọ bụ naanị ngwa ọrụ iji nweta otu ị ga-esi rụọ ọrụ. Ouchọghị ka igwe kwụ otu ebe gị bụrụ nke kachasị mma ma dị ụtọ bụ ọdịdị nke Antelope abụghị ihe na-enwu enyo. ndị ohi ma ọ bụrụ na ịnweghị mkpịsị aka ukwu ma mee ka anyị mata na nkọwa ihe isiokwu ịchọrọ ikiri n'ọdịnihu na igwe kwụ otu ebe gị na-echekwa usoro nchekwa.
Hụ na ị na-esote tost
Ndị ohi igwe kwụ otu ebe na-atụtụ mkpọchi?
Ọtụtụ ndị na-eche igwe kwụ otu ebe ma ọ bụndị ohi ọgba tum tum na-eburu mkpọchi. Mana nke ahụ na-arụ ọrụ naanị maka mfeakpọchi- ụdị ị nwere ikeghotajiri pen. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ dị ngwa ma dị mfe iji belata site na usoro ndị gbara ya gburugburu ma na-ezere nke ahụmkpọchi.Bọchị 7, 2018
Nwere ike ịkpụ ndị na-egbu ihe mkpọchi Kryptonite?
KryptoniteỌhụrụUKryptoLok Standard: Nke aU-mkpọchijiri usoro ijide diski, dị ka New-UMbido, na ọ na-abịa na otu ihe abụọ-deadlock imewe ka anyị n'elu ghota. (Versiondịanyịanwale mere.) Otú ọ dị, nnukwu nsogbu na nke amkpọchiagbanwebeghị:Bolt egbutusị ike ịkpụsite na ya.Ọnwa Ise 26, 2021
Kedu mkpọchi enweghị ike iji ihe ọkụkụ egbutu ya?
Chain kachasị mma nwere hexagonal ma ọ bụ Links Square
Otu ígwè ọrụ siri ike, nke siri ike nke ígwè nwere njikọ nke hexagonal na-egbochi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ohi ọ bụla na abolt cutter. Njikọ hexagonal (ma ọ bụ square ma ọ bụ trapezoidal) na-eme ka ọ ghara ikwe omumebolt egbutusịna-adịgide adịgide.Abụọ 4, 2021
Kedụ ka m ga-esi mee ka igwe ohi m ghara ịmasị ndị ohi?
Dirtfọdụ unyi ma ọ bụ duct teepu nwere ike-eme kaọ na-ele anyana-adịchaghị mmaka ndị crooks. N'ihi naigwenchedo teepunke gioche, oche aka, na ebe dị iche ichenke gietiti kamee igwe kwụ otu ebeakụkụ na-eyi ka ọ na-agba ọsọ.Ọnwa Ise 5, 2021
Kedu ihe mkpọchi enweghị ike iji egbutu bolt belata?
Enwere ike imechi mkpọchi U na ndị na-egbutu bolt?
Bolt egbutusịga mfeebipụsite na eririakpọchi, ma ọ bara uru iji mgbatị USB iji gbochie ohere! Ya mere oburu na ichoro gimkpọchi igwe kwụ otu ebeibuso agha megidebolt egbutusị, nweta otu ejiri ígwè siri ike mee, wee nweta nhọrọ kachasị sie ike.